Faahfaahin:Weerar Askar American Ah Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Baarka+Mareykanka Oo Khasaara Qirtay. – Calamada.com
Faahfaahin:Weerar Askar American Ah Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Baarka+Mareykanka Oo Khasaara Qirtay.
calamada June 9, 2018 2 min read
Weerarka oo dhacay gelinkii dambe shalay ayaa ciidamada Mujaahidiinta Wilaayada Jubooyinka waxay la beegsadeen huwan Saliibiyiinta ah iyo dabadhilifyadooda dhawaan soo gaaray deegaanka Baarka ee duleedka tuulada Buula Guduud.
Weerarka oo loo adeegsaday hubka culus iyo midka fudud ayaa lagu qaaday fariisinka cadawga ee ku yaalla deegaanka Baarka, waxaana rasaasta iyo madaafiicda Mujaahidiintu ay si toos ah ugu hoobanayeen xerada cadawga.
Dagaalka oo in muddo ah socday ayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyay Saliibiyiintii iyo Murtadiintii la weeraray.
Inta la xaqiijiyay 5 ka tirsan Ciidamada Saliibiyiinta Maraykanka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka ay Mujaahidiintu ku qaadeen saldhiga la weeraray.
Taliska ciidamada Mujaahidiinta ayaa shaaca ka qaaday in marka laga soo tago 5-ta askari ee Mayarkanka ah ay weerarka sidoo kale ku dhinteen 9 ka tirsan maleeshiyaatka Murtadiinta ah iyo 2 ka tirsan Saliibiyiin Kenya ee duullaanka ku wehlinayay ciidamada Maraykanka.
Dowlada Maraykanka oo iyaduna war kasoo saartay weerarka ka dhacay duleedka Kismaayo ayaa sheegtay in dhimasho iyo dhaawac ay askarteeda kasoo gaareen weerarka Mujaahidiinta.
Masuul u hadlay wasaarada gaashaandhiga Maraykanka ee loo yaqaano Bentagoonka ayaa sheegay in hal askari oo ciidamadooda ka tirsan uu ku dhintay weerarka, halka afar kalena ay dhaawacyo kasoo gaareen.
Saraakiisha Maraykanka ah ayaa intaas ku daray in ciidamadooda lagu dilay weerarka iyo kuwa dhaawacmay intuba ay ka tirsanaayeen ciidamada khaaska ah ee Maraykanka, kuwaas oo xilliga la weerarayay taageero dhanka dagaalka ah siinayay maleeshiyaatka Murtadiinta.
Warbaahinta Maraykanka oo s xiganaya Masuuliyiin ciidan oo ka tirsan wasaarada difaaca Maraykanka ayaa sheegay in askarta dhimashada iyo dhaawaca noqotay ay markii hore la kulmeen weerar dhanka madaafiicda ah kadibna loogu xijjiyay rasaasta ka dhacda qoryaha fud-fudu, taas oo saababtay geerida iyo dhaawaca soo gaaray askartooda.
Bentagonka Maraykanka ayaa sanadkii hore shaaca ka qaaday in 500 oo ka tirsan ciidamadiisa gaar ah ay ku suganyihiin Somaaliya si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka shareecada Islaamka.
Mujaahidiinta ayaa si joogta ah u beegsada ciidamada Maraykanka ah xilliyada ay ku jiraan hawlgallada ashahaado la dirirka ah, halkaas oo ay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ugu geystaan, balse Maraykanka ayaa dhaqan u leh inuu qariyo khsaaraha ciidamadiisa kasoo gaara weerarada Mujaahidiinta, marka laga reebo mar mar dhif ah oo uu awoodi waayo inuu daboolo xaqiiqada dharbaaxada ay ciidamadiisu la kulmeen
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 24-09-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 24-Ramadaan-1439 Hijri.